ဗီဒီယို - Emailvision နည်းပညာနှင့်တိုးတက်မှု Martech Zone
ဗီဒီယို - Emailvision နည်းပညာနှင့်ကြီးထွားမှု
သောကြာနေ့, ဇူလိုင်လ 22, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ကျနော်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပယ်ခဲ့သည် အီးမေးလ် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်။ ၎င်းတို့၏အဓိကအားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာဘာသာစကားမျိုးစုံသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်နှင့်ဘာသာခြားပေါင်းစုံပါဝင်သောအထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏လူမှုရေးဆိုင်ရာပေါင်းစည်းမှုနှင့်လာမည့်အချက်အလက်ကိရိယာများကိုထည့်ပါ။ Emailvision သည်ဤမျှကြီးမားသောတိုးတက်မှုကိုတွေ့ကြုံနေရသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ပျမ်းမျှကျော် မက်ဆေ့ခ်ျသန်း ၁၀၀ တစ်နေ့လျှင်။
ကျော် မက်ဆေ့ခ်ျ ၅ ဘီလီယံ တစ်လလျှင်။
ကွပ်မျက် 350,000 စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး တစ်လလျှင်။
ကျော် အသုံးပြုသူ - 8,500.
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 97.5% ပေးပို့နိုင်မှု (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ISP များနှင့်အတူအထင်ကြီး)
အံ့သြစရာ 100% Uptime နှင့် latency မရှိပါ!
၁၈.၂% CTR ဖြင့် Google ရလဒ်များအတွက်နံပါတ် ၁ အဆင့်